Dowlada Siiriya iyo Mucaaradka hubeysan oo Heshiis xabad joojin ah Caawa ay dhaqan galinayaan!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Dowlada Siiriya iyo Mucaaradka hubeysan oo Heshiis xabad joojin ah Caawa ay dhaqan galinayaan!!
Dowlada Siiriya iyo Mucaaradka hubeysan oo Heshiis xabad joojin ah Caawa ay dhaqan galinayaan!!
Dowlada Siiriya iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah oo caawa saqda dhexe ka bilaabanaysa kadib wadahadalo ay yeeshteen labada dhinac.
Heshiiskan ayaa waxaa ku dhowaaqay Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyadoo uu xaqiijiyay Wasiirka Arrimaha dibada dowlada Turkiga. Wadamada Ruushka iyo Turkiga oo kala taageeraya dhinacyada iska soo horjeeda ayaa heshiiskan qeyb libaax ka qaadanaya.
Qaar ka mid ah afhayeenada ururada mucaaradka Siiriya ayaa xaqiijiyay heshiiskan balse qaar ka mid ah ururada nabaddiika ah ayaan ka mid ahayn heshiiskan.
War kasoo baxay ciidamada Siiriya ayaa lagu sheegay in ururka IS iyo Jabhada Fateh al-Sham oo horey loo oran jirey Nusra iyo kooxaha ka farcama ayaan ka mid ahayn heshiiska. Heshiiskan ayaa waxaa uu ka dhaqan galayaa bariga Ghouta oo ku dhow Dimishiq iyadoo deegaankaa uu ahaa mid si weyn loogu dooday.
Horaantii bishan ayay dowladaha Ruushka iyo Turkiga waxay kalin weyn ka sameeyeen in xabad joojin ka dhaqan gasho magaalada labaad ee ugu weyn Siiriya halkaas oo tobanaan kun oo maleeshiyada mucaaradka iyo dad rayid ah oo ku xayirnaa magaaladaas laga daadgureeyay.
Horaantii sanadkan ayaa xabad joojin ay garwadeen ka ahayd Qaramada Midoobay uu si dhaqso ah ku burburay.
Heshiiskan oo aan horey loo saadaalin ayaa la filayaa in uu horseedo wadahadalo ay isugu yimaadaan bil kadib dowlada Siiriya iyo kooxaha mucaaradka iyadoo wadahadalada lagu qaban doono caasimada Jamhuuriyada Khasakhistan ee Astana.
Ugu yaraan 300,000 oo ruux ayaa la rumeysan yahay inay ku dhinteen dagaalo ka socday dalka Siiriya kaasoo bilowday bishii March 2011, iyadoo dagaaladaa ay ahaayeen kuwo yimid kadib kacdoon shacbi oo loogaga soo horjeeday Madaxweyne Bashar al-Assad.
Illaa afar malyan oo ruux ayaa ka cararay dalka Siiriya iyagoo magangelyo u raadsaday dalalka deriska la ah iyo weliba dalal ka mid ah qaarada Yurub.
Previous PostDaawo: Xasan sheekh oo sharaxay Waxqabadkiisa iyo wuxuu ka yeeli doono maamulka Somaliland! Next PostWar Deg Deg ah: Shabaab oo laga saaray Degmada Afgooye iyo sarkaal dowlada ay ka dileen!